Wati Wambopa DeviantART mukana sezvinowanikwa mukutsvaga chiteshi?
Ndakatsvaga DeviantART kune zvinyorwa zvangu zvisingawanzoitiki asi zvinobudirira mapurisa evablogi pano pa WHSR uye vazhinji vevaverengi vakandiudza kuti vakanga vasati vambofunga nezveDeanthu art kukurudzira mabhlog.
Iko kunzwira tsitsi，nekuti DeviantART（Ini ndichaidaidza DA kwenguva pfupi dzimwe nguva mune ino post）yakanyanya kudarika peji renzvimbo yevaimbi。 DA inzvimbo yekushamwaridzana kubva mumusoro kusvika kune zvigunwe，uye kunyange ichinyanyogadzirirwa vekunyora uye vekunyepedzera vanyori，inopa yakawanda mikana yemagariro kune vanoblogs zvakare，
Zvisungo zvakatsigirwa muzvitsanangudzo uye kutumira zvinyorwa（zvinonzi Zvitadzo）
2 Nhanho 1-Unoda Rudzi Ruripo
3 Nhanho 2-Funga
4 Danho 3-Shandisa Platform Kukurudzira
4.1 1. Zvinyorwa Zvinyorwa
4.2 2. Mazano（私人消息）
4.3 3. Kutsauka（艺术 & Kunyorera提交的内容）
5 Danho 4-Tora Kubatsira kweSvondo
6.1 1. Idziridza Hukama Nekuverenga Vateveri Vako’Nyowani Zvinyorwa uye Nhau dzeMapepa
6.2 2. Mindduro kumashoko ose ounowana
6.3 3. Iva Nomutsa uye Wechokwadi。 Dzivisa Mazhenje Ekutengesa uye语音促销面板Zvose Zvinodhura
7.1 1. Usarege Kuziva Iyo礼节
7.2 2. Iva Nehanya Nekipi Mifananidzo Yekutengesa Unoshandisa
7.3 3.伊娃·内汉娅·内 "巴萨（Rasafuridzirwa）"
7.4 4. Nyaya Dzakashata垃圾邮件
8 Shandisa Zvakanaka DeviantART统计
8.1 Shandisa Google Analytics（分析）
9 Tora woenda Nazvo
Kuva nehurukuro yako uye nharaunda paD DA inobatsira kana niche yako yekubhururuka ichiwira mune imwe yenzvimbo dzinotevera：
艺术类 & 工艺
米凡纳尼佐 & 黑手党
Inogona kushanda nedzimwe nzvimbo pamwe chete，kana iwe uri kugadzira zvakakwana kuti uuye nekunakidza kwezvinhu zvose zviri zviviri（niche yako uye zvisikwa zviripo）pamwechete.
Iyi chinyorwa ndechekuti ndakashandisa sei DeviantART mu2013 kuunza vateveri ve20 + kuverengera yangu yezvinyorwa uye kuti nditevere kushandiswa kwangu paIndaneti uye kuburikidza nehuwandu hwemashoko ega ega。 Bhuku rangu renhema nderokutaura nyaya dzakapfupi nemifananidzo dzine机器人，vanhu uye vatorwa sevatongi。 Iyo博客pachayo ndiyo webhusaiti yekugamuchira nyaya dzangu nemifananidzo。 Peji yepamberi ndiyo pandinobhura nezvemashoko，mazano，zvinyorwa，kubvunzurudza，mazano uye kukurukurirana nehana yangu shomanana.
Nhanho 1-Unoda Rudzi Ruripo
Ndakanga ndatova nomukurumbira paDeviantArt semunyori uye munyori。 Sezvo ndichibatana nemunharaunda mu2004，ndakavaka mharaunda yevateveri vakakomberedza nzvimbo yangu，vanhu vose vaifadzwa zvechokwadi nebasa rangu uye vandakavaka ushamwari navo.
Kuve ane hushamwari uye akavhurika ane pfungwa ndizvo zvinoshanda paDeviantART zvakanakisa，nekuti maartist nevanyori havashandise ipuratifomu kungoda nhamba uye tsoropodzo，asi kuvaka hukama kupfuura zvese.
Zvakatora makore kukudziridza hukama uye kushandura vausingazive vateveri。雷加·恩迪姆博德泽雷·库蒂zvinyorwa（DeviantArt的主要博客和个人博客；我也有我的博客）.
Apo ndakasarudza kukurudzira kuvapo kwebhuku rangu renhema mumusoro kune izvo zvandaive ndakagovana pamusoro paDeantantART，ndakashandisa zvinyorwa zvebhuku uye zvitsanangudzo mune zvinyorye（Kusiyazera）.
MALLWE muenzaniso ndiyo nheyo yenyaya yangu yenyaya yandakaisa pa blog yangu kwemakore，asi kuti ndakasarudza kudhindazve DA kuti ndiwane mhinduro yakawanda，ALLIFE项目。 Nhasi iyo kuchinja kunobata 1,002 maonero，12 zvido uye 64 mazwi.
Nhanho inotevera yakanga iri kuedza kuvaita kuti vaite zvinyorwa zvinyorwa zvavanofarira窗格博客yangu。 Kushandisa zvinyorwa zvinyorwa，ndakakoka mharaunda yangu kuti ione bhuti rangu yehuwandu hwehuwandu panel zvandakaisa kuna DeviantART.
Iyoyo yaive nhanho yakakosha：ndakaudza vateveri vangu kuti ndaida rubatsiro rwavo zvakanyanya zvakashata，nekuti ndakanga ndisina chokwadi nezvekuti dzimwe sarudzo dzangu pamusoro kuhanauro aka kanakauraka anadar veakaenara kuakanaka kuaka nakaidaza vakavera kuanati.
Kuti zvive zvakajeka，kupinda muDA DA hakusi nyaya yekuchengeta nemhinduro yaunogamuchira，asiwo inosanganisira kutarisa nevanosvitsa nguva nenguva； Somuenzaniso，nokuverenga uye kupindura pamusoro pekupedzisira kwekupinda kwavo kwepanhau kana maitiro avo matsva kana zvinyorwa zvakanyorwa。 Ini ndichawana zvakanyanya pamusoro peizvi gare gare munyaya ino，asi zvakakodzera kuti titaure pano，zvakare.
Mhedziso yenharaunda yeDeviantART yakasimba kwazvo; mhuri-yakafanana nenzira。 Ndichatsanangurira zvakare gare gare mumashure kuti maitiro api anokwidza nemiganhu nemitambo yekunyorera yakaodzwa mwoyo pachikuva ichi（uye kwete DA chete; Kingged.com inoshanda nenzira imwe chete，kushandisa sangano aya）.
Danho 3-Shandisa Platform Kukurudzira
Chii chandakaita kuti ndiunze vazhinji mafaira ku博客yangu？ Ndakashandisa chikamu chakasimba窗格zveDA yangu个人资料：我的Deviant Journal.
Ndakanyora muganisi mutsva pandakaenda kune tsanangudzo pamusoro pezvingaitwa nevateveri vangu paBlog my fiction "Vanyori".
1. Zvinyorwa Zvinyorwa
Vanhu vazhinji munharaunda yangu yeDA vanoverenga uye vakataura pamusoro penyaya yangu yekunyora zvinyorwa kupfuura maDhivhosi yangu，saka ndiyo yaive nzvimbo yakanakisa kubata munhu wese。 Magazini ari zvakare apo vashandisi veDVD vanowana zvakanyanya zvemunhu nekutaura kwavo，saka mhinduro yandakawana ipapo yaive nenjere kupfuura zvandakawana panel imwe nzvimbo papuratifomu.
Ndakashandisawo DeviantART Journal kukurudzira我的博客Twitter帐户； zvisinei，ini ndakabudirira zvishoma nazvo（hapana chekutaura pakupinda uye chete 3 yakawanda vateveri veTwitter）。 Haasi mafeni mazhinji munharaunda yangu yeDA anoratidzika kunge anoshingairira vashandisi veTwitter，zvirinani avo vari mune rangu网络。 Nekudaro，ini ndinokukoka iwe kuti uedze iyi mhando yemuchinjiro-kukwidziridzwa，zvakare;印度国营航空公司.
Kune avo vandaiziva kuti vaisazoverenga bhuku rangu nechikonzero chero chipi，ndakatumira Mucherechedzo（meseji yakasarudzika paDA）nenhau uye ndakakumbira mhinduro.
Ndakagadzirisa kushandisa izwi rorudo mumashoko angu，nokuti icho chakanga chave chiri chimiro chenguva dzose yehurukuro yedu yose yevanhu uye yega.
Iyi ndiyo nzira yandakawana nayo 10 + mabhii kumasviki angu ari oga-chete tsamba yekunyora kwebhuku renhema.
3. Kutsauka（艺术 & Kunyorera提交的内容）
Imwe nzira yekusimudzira zvaunofunga ndeye Kupesana。 Ingosiya chikamu chezvinhu zvako（摘录，图像剪切或短片）iyo inosangana nehururo yakazara pa博客yako.
Ndakaita izvi ne nyaya yangu pfupi Yakaputika。 Unogona kuona mufananidzo uri pasi apa：
Sezvaunogona kuona，ndakatumira chete ndima mbiri dzokutanga dzenyaya yangu pfupi uye ndakawedzera "猪尾草 …"Taurirana kune imwe yose pa blog yangu。 Iwe Unogona kuita zvakafanana neongororo dzako dzenyaya uye nguva refu.
Kuti uwedzere mamwe mashoko-kusanganisira tsika yechiremera chehupenyu hwangu-ndakashandisa nzvimbo yekutsanangura mu fomu yangu yekukumbira：
Kana iwe uchida kuti vateveri vako vataure chete pabhulogi yako uye kwete paDeantantART，vhura zvinyorwa pamusoro pekutsauka kwako uye kumbirai vashanyi vako kuti vataure panel bhokisi rako rekutumira。 Zvisinei，Ndinokurudzira kuti iwe usiye mitsara miviri yakazaruka kana iwe uchida chaizvo mhinduro，nokuti haisi Muterver WED DA wese achada kusiya chikwata kuti ataure窗格imwe nzvimbo.
Kana iwe ukasika zvishandiso semubatsiri kana kuwedzera pamaklogi ebhuku，tarisa iyi nhaurirano窗格DeviantART论坛.
Danho 4-Tora Kubatsira kweSvondo
Mushure memwedzi yakati kuti vateveri vangu vaziva nezve bhurogu iyi，ini ndaida mhinduro chaiyo nezvayo nezviri mukati，saka ndakashandisa iyo magazini zvakare kugovera ongororo。 Ini zvakare ndakashandisa DeviantART Zvidimbu kutumira chinongedzo kuongororo kune vanhu vandaiziva kuti vaisazoverenga bhuku rangu.
pano inosangana nechokupinda neongororo iwe kuti uone。 Cherechedza kuti ndakagamuchira 17 mazwi anofadza pamusoro pekupinda ikoko ndoga uye kwete pa Blog chete.
Pakutanga mu2015，ndakanyora imwe magazini yekupinda kuti ndikumbire mamwe mhinduro panel yangu zvemukati uye博客，sezvo DA Polls haina kundibata zvakanaka。 ano野舞郎
村田千枝一郎，瓦塔基·瓦卡格姆古拉·桑巴·扬古·耶·CTA yakasarudzwa uye emaimeri senzira yekukurukurirana yemhinduro.
Sezvakaita paKinggedhi，haugone kungo enda垃圾邮件。 Unofanira kuumba hukama hwechokwadi，zvichibva pamwoyo，kubva pakuda kuita zvemukati mako uye mufaro kugoverana nevamwe。 Mune mamwe mazwi，iwe Unofanirwa kuve "Nyanzvi pamoyo", kunyangwe kana usiri muimbi mune rako basa kana using a bhurogu nezve art.
ukama的nokusika nekukudziridza，unogadzira wakavimbika anotevera。 Heano mamwe mazano anobatsira anokutungamirira.
1. Idziridza Hukama Nekuverenga Vateveri Vako’Nyowani Zvinyorwa uye Nhau dzeMapepa
Tsigira vateveri vako uye vateveri sezvavari kukutsigira。 Pese pamunomira nemagarari avo nemagazini uye iwe uchisiya mhinduro pabasa ravo，unosimbisa hukama nevanhu ava，kuumba zvisungo zvinopfuura nekureruka-uye-kugamuchira pakati pevanhu vaviri。 Iko kutanga kwa ushamwari，chimwe chinhu chaunofanira kugara uchichikoshesa se博主，nokuti hapana博主inogona kuiita iga isina vanhu vanozvitarisira zvechokwadi.
Izvi ndezvechokwadi kune chero chikuva iwe chaunoshandisa，asi kunyanya DA。 Zvakare，zvemukati zvevateveri vako zvinogona kukurudzira kuti iwe ugadzire zvakawanda uye zviri nani zvemukati.
2. Mindduro kumashoko ose ounowana
Vashandisi veDeviantART vanofarira kushandisa nguva yakanaka vachitaura nezve vamwe basa uye zvinyorwa zvemapepa，nekuti ivo vanoziva iri nzira huru yekuvaka hukama hwakakimba.
Izvi ndizvo zvaunofanira kuita kana iwe watanga kutora mhinduro pamabasa ako：pindura kune izvo zvataurwa！ Hapana hukama hunotanga（kana hunosimbiswa）kusvikira iwe uchibvuma uye ukapa mhinduro kune vatauriri vako.
Rega vateveri vako vaone kuti une hanya nezvavari kutaura。 Mukudzoka，Ivo vanonamira newe zvakareba uye vakave vakavhurika kune chero mazano matsva aunogadzira mune ramangwana.
3. Iva Nomutsa uye Wechokwadi。 Dzivisa Mazhenje Ekutengesa uye语音促销面板Zvose Zvinodhura
Musimboti wenharaunda dzeDA ndiko kushuva kwechokwadi kusangana nevanhu vatsva uye kuvaka hukama hwakakomberedza hunyanzvi nekunyora。 Usaende kunotengesa，美国，垃圾邮件：idzi inzira dzemoto dzekurasikirwa nevateveri（varindi）kana kuti kuendeswa kune vashandi veDA kuti vasarudze.
Kuve wekutengesa hazvishande kuDA zvakadaro。 Kuedza kwako kukwidziridzwa kunofanirwa kunge kuri kwechokwadi，kunogarisana，iwe unofanirwa kuratidza kuti unotenda mune izvo zvaunoita（uye UNODA kutenda kublog rako nezviri mukati，手写？）。 Izvi hazvisi zvimwe zvisina musoro SEO zano rekuti vashandisi vewebhu vakashandisa munguva yakapfuura-Izvi ndezve kuve pakati pevanhu.
Kuwedzera zvido zvehupenyu hwako窗格博客ndiyo nzira yekuenda nayo，本古，阿西 "kuita kuti zvive nyore" hakusi kungofanana chete-iwe unofanirwa kukurudzira vateveri vako kuti vafunge，uye kuti uite izvozvo，unofanirwa kuva nechokwadi chokuti vanonzwa ngozi kuita saizvozvo.
Tsanangura kuti zvinhu zvinoshanda sei pa网站yako，kuti iwe haungapindi maitiro avo，kuti nzvimbo yako yakachengeteka kutarisa nekushandisa nguva。 Uyewo，chengetai zvatinokurudzira nemamwe mazano aunoziva kuti vagara vaifarira。 Somuenzaniso，kana vachikoshesa zvifananidzo zvekunyama uye和mufananidzo kana bhajiro rekufamba，vaudze pamusoro pezvifananidzo zvakanaka uye mafirimu emafambiro aunayo窗格yako博客。 Ipa Chikonzero iwe uchifunga kuti vachafarira zvinhu izvi zveblogiti yako.
Ipfungwa yakanaka kuti ugare uchitanga nekuona面板DA。 Semuenzaniso，unogona kugadzira艺术品kana pfupi信息图表iyo inoratidza博客yako positi：wedzera zita kwairi uye woritora saiwo hunyanzvi kana mameseji ane预览/横幅mufananidzo uye wozoisa zvinyorza muku.
Ita zvakafanana nemabhuku ekunyora。 Nguva dzose探戈tanga nemufananidzo，shandisa mifananidzo uye mifananidzo yakawedzera uye inogadzirisa rugwaro rwako.
1. Usarege Kuziva Iyo礼节
Pane marudzi ehutano izvo zvisingabvumirwi paDeantantART平台窗格tsika，zvakadai sevanhu vakuru vatsvuku uye mavara.
Kana iwe uchifanira kutarisa nyaya dzine chokuita nepabonde，zvechisarura kana zvechisimba，chero chii chaunonyora chinofanira kuramba ichiremekedza mirayiridzo，saka unoda kuti ucheke kana kuongorora basa rako。 Wedzera chibatanisi kune webhusaiti yako kuitira zvakasara zvehupenyu hwako.
Sezvakaita chero mapurisa，chero zvinyorwa zvinokurudzira kusarura uye chisimba hazvibvumirwi nemitemo yenyika.
2. Iva Nehanya Nekipi Mifananidzo Yekutengesa Unoshandisa
Vashandi veDeantantART（uye vashandisi vavo）vanowanzotarisa kukanganisa kwekodzero uye chikwata chine Mutomo unorwisana nembavha yakabirwa（过去礼节上的礼节链接）.
Unogona kubvunzwa magwaro anoratidza kuti uri mukati mekodzero dzako kushandisa mapikicha auri kushandisa。 Kana Iwe usingakwanise kupa chero humbowo，zvemukati zvichaderedzwa.
Kana iwe使用akwanise kushandisa zviri pamutemo imwe yemhando yekutora mifananidzo（塔里萨）知识共享kana kuti Public Domain dzimwe nzira.
Vamwe veDAR vanyori uye vanyori vane hanya kana zvasvika pakuita basa rinobva，saka kana iwe ukapinda mumhando ipi zvayo yehupenyu yakakufuridzira，iva nechokwadi chokuti uri mukati memakodzero ako ekugadob.
Kufuridzirwa hakusi帕西pekubvumira kodzero，asi kunyoresa。 Chengetedza mutambo wekuyambuka uchiona kuti urege kudzivisa nyaya dzepamutemo kana dzetsika.
4. Nyaya Dzakashata垃圾邮件
Hazvisi zvinonzwika kuti vamwe vashandisi veDA vanoedza kushandisa simba rekusimudzira remazita（pane zvinyorwa zvemagazini，kutsauka uye profile yevashandisi）kusimudzira izvo zvavo，zvadzurwa uye makwik。 Zviito izvi zvese zvichazopedzisira zvawana chirango cherumwe rudzi，kubva pamushandisi wekuvharidzira（nemushandisi akatsamwiswa）昆达.
Ndazvitaura pakutanga mune ino post uye ini ndichataura zvakare：使用垃圾邮件，nekuti haisi kuzounza mabhenefiti，kunyanya kuDA.
Shandisa Zvakanaka DeviantART统计
DeviantART Inopa Mumwe Muenzi Gallery工具，Kunyangwe maakaundi emahara（Kunyangwe Mune imwe fashoni，Sezvandiri Kutsanangura Pazasi）.
Iwe unogona kuwana zvishoma nezvokuti sei stats summary inotarisa panel ye Google统计信息摘要Bhatani racho pacharo idiki tafura yehuwandu，isati yashanduka kuita "统计" Mune mavara makuru，塞兹瓦卡拉蒂兹瓦照片。 Izvozvi，bhatani rangu rinoratidza：
努库兹瓦加·巴塔尼 "更多统计" pasi peetafura pfupi pfupi，iwe uchaendeswa kune peji ye stats inounganidza mashoko ose zvakadzama。 Ona pasi apa：
Chii chatinofanira kutarisa papeji ino?
"网页浏览量" inokuudza kuti mangani mapeji aunofanirwa kuita nawo
"Yakatarwa X nguva" inokuudza kuti kazhinji sei（gwaro玫瑰）Kusiyana mukati mako mafirimu kwaionekwa
"X Deviants手表" inoratidza kuti vangani vashandisi veDD（deviants）tevera（tarisa）iwe
"Yakagamuchira X zvinyorwa" ndiyo nhamba yemashoko（zvachose）我wakagamuchira paZvitsauko zvako
"Yakawedzerwa kunevanotsauka’nguva dzeX" 恩迪约·胡万杜·温格瓦·扎努法里瓦
"Akapa X zvirevo zvese 10 yakagashirwa" ndiye avhareji yemashoko awakatumira窗格dzevamwe mabasa e10 yese yawakatambira窗格yako（iyo yakakwira iyi nhamba，zvakanyanya kana iwe waunoshanda uchitaura nezvawataura）
"Kudengenyeka nemashoko akawanda NDE …" zvinoratidza kutendeuka kwako kwakagamuchira mashoko akawanda mukati mako。 Ichi chiratidzo chinoratidza izvo vateereri vako vari paDeviantART Vanofarira uye vanotarisa mukati mako
"INE X的Inonyanya kufarirwa" inokuudza kuti Kudengenyeka kwako kwaiva kwakanakisisa uye kuti ndezvipi zvakasarudzwa zvakagamuchirwa
"Inonyanya kuonekwa yakatsauka ndeye …" inokuudza kuti ndeipi pakati peZvipupuriro zvako zvakagamuchira peji peji maonero，uye vangani
"X mazano akapiwa nokuda kwemashoko ega ega 10" ndiyo nhamba yevanyadzisa yawakagamuchira pamashoko ose e10 wawawana穆巴拉萨rako（pamwero）
Mavhareji ekuverengera kuwandisa，kusanganisira mazuva akawanda apfuura pakati pekutumira（muchidimbu）uye zuva ripi revhiki，nhamba
"Ruzhinji rwezvakatsauka runotumirwa kune（类别）" rinokuudza kuti ndeupi（Zvinyorwa，Mifananidzo，Zvimwewo）wakashandisa zvakanyanya pawakatumira basa kuna DeviantART
Nhamba yevheji yezviverengero，kusanganisira mapurogiramu emaonero，maonero uye zvido zvekufambisa kwega uye zuva，uye peji maonero pazuva.
Vashandisi vakasununguka paDeantantART chete vanokwanisa kuwana pfupiso tab mune peji ye stats，apo yakabhadharwa（Core）nhengo dzinogonawo kuwana mamwe ma tate，anopa mamwe mashoko akawans uye zsvinyorwa，.
Kunyange semusununguko wakasununguka，zvisinei，unogona kusarudza pakati pekutsvaga kwe 3 yekutaura kwako：Zvose-nguva，Gore rapera uye最近6个月。 Izvi zvinobatsira kuti uenzanise basa rako rose nemabasa ekupedzisira.
Shandisa Google Analytics（分析）
DeviantART inobvumira vashandi vanobhadhara（Core mitezo）kuwedzera kadhi yeGoogle Analytics（分析）kumaprofayiri avo kuti vawane zvakanakisisa zvezvinhu zvose zviri zviviri：平台流量分析neGoogle Analytics.
将光标悬停在zita renyu rekombiyuta pakakwirira uye mhando inodonha ichazarura上。兹瓦尼亚 "Zvirongwa". Iwe uchawana runyora rweMasangano neZvamwe zvirongwa kurutivi rworuboshwe rwepeji。 Dzvanya Munhu -> Zvose uye wozorora kusvika kune Zvimwe zvinhu Zvirongwa bhokisi; pamberi payo，uchawana bhokisi reGoogle Analytics（分析）nemunda kuti unamate yako GA跟踪ID.
Kana Iwe使用Azivi Maiitiro Ekuita Izvi，Tinya "Ndekupi kwandinowana yangu跟踪ID?"Sunga pedyo nemunda wokupinda.
Shandisa DeviantART kana bhulogi yako iri pamusoro pezviratidzwa，mhizha，fikisi，kuberekwa uye zvimwe zvinhu zvaunogona kuita iwe pachako.
Ita shuwa iwe unofarira kutora chikamu muhupenyu hweenzako，nekuti iko kutaurirana chaiko kunozoita kuti ubudirire paDA.
Gadzira nzvimbo yevashandi vanopoteredza zvese zvaunoshandisa uye iva nechokwadi chokuti vanoziva kuti vanogona sei kuwana zvakawanda pa Blog yako.
Tora uchishandisa DeviantART nhamba uye uvabatanidze neGoogle Analytics.
Wati wambopa DeviantART mükəmməl sezvinowanikwa mukutsvaga chiteshi? Ndakatsvaga DeviantART gün zvinyorwa zvangu zvisingawanzoitiki asi